Duulimaadkii ugu horreeyay ee Air Canada oo ka ambabaxaya magaalada Toronto kuna sii jeedda magaalada Doha ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Hamad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadkii ugu horreeyay ee Air Canada oo ka ambabaxaya magaalada Toronto kuna sii jeedda magaalada Doha ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Hamad
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways soo dhoweeyeen Air CanadaDuulimaadkii ugu horreeyay ee ka imanaya Toronto ilaa Doha, oo ka dhigaya Madaarka Caalamiga ah ee Hamad inuu noqdo garoonka keliya ee Bariga Dhexe ee lagu fuliyo adeeg qorsheysan oo ay qaadaan shirkadda Waqooyiga Ameerika. Duulimaadka waxaa lagu soo dhoweeyay salaanta madfaca garoonka diyaaradaha ee Hamad iyo xaflad xarig jarka ah oo ay ka soo qeyb galeen Marwo Danjire Stefanie McCollum, Safiirka Canada ee Qatar oo ay weheliso Madaxa Fulinta Qatar Airways Mudane Mudane Akbar Al Baker iyo Madaxa Madaarka Caalamiga ah ee Hamad. Sarkaalka Howlgalka Engr. Badr Mohammed Al Meer.
Duulimaadka maanta ee bilowga ah wuxuu noqonayaa duulimaadkii ugu horreeyay abid ee Air Canada ay ku tagto Doha waxayna muujineysaa sii xoojinta xiriirka Canada iyo Gobolka Qatar. Qatar Airways iyo Air Canada ayaa dhowaan kala saxeexday heshiis cod-wadaag ah oo khuseeya safarka u dhexeeya Doha iyo Toronto. Heshiiska ayaa u sahlaya labada rakaab ee duulimaadka inay ku raaxeystaan ​​isku xirnaansho la’aan, hal joogsi oo ka timaadda iyo ka imaanshaha Toronto iyada oo loo sii marayo Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe, Madaarka Caalamiga ah ee Hamad iyo wixii ka sii dambeeya in ka badan 75 duulimaad oo Afrika ah, Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Safiirka Canada u fadhiya Qatar, Marwo Danjire Stefanie McCollum, ayaa tiri: “Waa wax cajiib ah inaan halkaan u imaado inaan goobjoog ka ahaado, soona dhoweyno, duulimaadkii ugu horreeyay ee Air Canada ay ku tagto Doha. Waa tusaale kale oo la taaban karo oo muujinaya xiriirka ganacsi iyo bulsheed ee sii kordhaya ee u dhexeeya labadeena dal. Qatar waa lamaane muhiim u ah Kanada, isku xirnaanshaha duulimaadyadan ayaa ah horumar kale oo wanaagsan oo ku yimid xiriirkeenna adag ee labada dal. ”
Madaxa Fulinta ee Kooxda Qatar Airways, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Aad baan ugu faraxsanahay xiriirkan adag ee ay Qatar Airways la leedahay Air Canada iyadoo uu hormuud u yahay saaxiibkey, Calin Rovinescu oo sumadda adag ee Air Canada saaray. khariidada duulista hawada adduunka. Air Canada, oo ah mid ka mid ah diyaaradaha ugu guuleysiga badan Waqooyiga Ameerika, ayaa qiimo weyn ku soo kordhin doonta shabakadda ballaarinaysa Qatar Airways. Kanada waa suuq istiraatiiji ah oo muhiim u ah Qatar Airways, adeeggan wuxuu dhameystiri doonaa afartii adeeg ee aan joogno ee toddobaadlaha ah ee Montreal wuxuuna siin doonaa safarradeenna fursado dheeri ah marka aan qorsheyneyno safarka iyo ka imaanshaha Kanada. Waxaan rajeyneynaa inaan ka faa'iideysano awooddeena dhameystirka ah si aan u kordhino xulashada kumanaan rakaabkeena ah isla markaana aan awood ugu siino isku xirnaanta tiro badan oo ah meelaha cusub - gaar ahaan Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe. ”
Madaxweynaha Air Canada ahna Madaxa Fulinta, Mr. Calin Rovinescu, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan xoojiyo xiriirka aan la leenahay Qatar Airways, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee duulimaadyada adduunka, taas oo u oggolaan doonta Air Canada inay si wanaagsan uga jawaabto isbeddelada dalabaadka. Maaddaama Air Canada ay dib u dhiseyso shabakadeeda caalamiga ah, waxaan si istiraatiijiyad leh u horumarineynaa jidad cusub waxaanna u jeesaneynaa xagga suuqyada wax ka qabta tirada dhaqamada kala duwan ee sii kordhaya ee Kanada. Maaddaama in badan oo ka mid ah macaamiisheennu ay dib u bilaabayaan safarka caalamiga ah sannadka dambe, heshiiskan kor loo qaaday wuxuu u oggolaanayaa reer Kanada fursado badan oo ku habboon oo ay ku booqdaan qoyskooda iyo asxaabtooda, iyo sidoo kale furitaanka goobo cusub oo xiiso leh. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa saaxiibkeyga wanaagsan, Mudane Akbar Al Baker, soo dhaweynta diirran ee uu u fidiyay Air Canada magaalada Doha. ”
Engr. Badr Mohammed Al Meer, Madaxa Hawlgalka ee Madaarka Caalamiga ah ee Hamad ayaa yidhi: “Madaarka Caalamiga ah ee Hamad wuxuu ku guulaystay inuu sii wado bixinta adeegyadiisa abaal-marinta leh ee adduunka si loo hubiyo isku xirnaanta adduunka. Iyada oo diirada la saarayo hubinta xulashada rakaabka, dabacsanaanta, iyo ladnaanta shucuurta, waxaan ku faraxsanahay inaan kordhino waxyaabaha aan u fidineyno ee ku habboonaanta iyo helitaanka rakaabka Air Canada ”.
Madaarka Caalamiga ah ee Hamad wuxuu ka faa'iideystaa goobtiisa istiraatiijiga ah, maadaama 80% dadka adduunku ay ku jiraan duulimaad lix saacadood ah oo ah HIA, taas oo siisa fursado isku xirnaan badan oo ku habboon safarada adduunka. Iyada oo ay ku bixiso waxyaabo badan oo qaab nololeed ah oo ku saabsan tafaariiqda, martigelinta, iyo dhaqanka oo ay weheliso tikniyoolajiyadeeda awood siinta rakaabka, HIA ayaa ah doorka laga doorto adduunka ee loogu talagay socdaalayaasha adduunka.